कसले भन्छ भगवान छैन ? हेर्नुस गाईले पत्ता लगाएको गुप्तेश्वर महादेव | Rochak
April 19, 2021 NepstokLeaveaComment on कसले भन्छ भगवान छैन ? हेर्नुस गाईले पत्ता लगाएको गुप्तेश्वर महादेव
काठमाडौं – कसले भन्छ भगवान छैन रुरु हेर्नुस गाईले पत्ता लगाएको महादेव १ दर्शन गर्नेको भिड । तपाईपनी कमेन्टम ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस ब्याउन लागेको गाई गोठबाटै हरायो । अहिलेको गुप्तेश्वर महादेवपारिपट्टि खेतमा गाईगोठ थियो । गाई खोज्दाखोज्दै महिनौं बित्यो । फेलापरेन । गाईधनीले गाई माया मारिसकेका थिए । मनमा तोड परे पनि गाई माया मार्नुको विकल्प थिएन ।,
‘अर्खौले बजारबाट पाँच किमि दूरीमा रहेको गुप्तेश्वर पुग्न ओह्रालो र फर्कंदा उकालो बाटो छ । गुप्तेश्वरको केही माथिसम्म यातायात साधन पुग्छ । त्यहाँबाट १० मिनेट पैदल हिँड्नुपर्छ ।गाईले पत्ता लगाए पनि त्यो गाई कसको थियो होला भनेर जिज्ञासा लाग्न सक्छ । गाई स्थानीय सुवोध राई थियो । राईको गाई गुप्तेश्वर महादेवमा अड्किएको हो । स्थानीय बूढापाकाको भनाइअनुसार गाई र गाईधनीले १७२६ मा गुप्तेश्वर महादेव पत्ता लगाएका थिए ।
केटीएमले ७५० ड्युक र अन्य मोडल ल्याउने पक्का
May 7, 2021 May 7, 2021 Nepstok